Pisa Pelle Talyaani Talyaani ah
Subscribe & Keydso
Ka hel lambar dhimis qarsoodi ah emaylkaaga.
Dhammaan qaybaha Dhammaan qaybahamaalaboorsadasuunkamiisaaniyadxirxirtaiskutallaabkiiska dukumintigaboorsada gacantalaptopRasuul ahgarabkasafarkadhexdajeebka
Isku day ₺
Kusoo gal akoonkeyga
Gali e-maylkaaga iyo eraygaaga sirta ah:
Dib u soo hel lambarka sirta ah
Ma xasuusataa eraygaaga sirta ah?
Ku laabo galalka
Fadlan buuxi macluumaadka hoosta:
Hore u leedahay xisaabta?
Lagu farsameeyay Tuscany, Italy
Ka Iibso Boorsooyinka maqaarka ee Talyaani ah oo casri ah Qiimaha Weyn
Dukaamada Lidka Dukaanka
Dukaamada Garabka Dukaanka
Dukaammada boorsooyinka gacanta
Dukaamada Ragga Dukaan
Soo iibso suumanka
Dukaamada Safarka Dukaanka
Dukaamada Laptop Dukaanka
Pisa Pelle waxay aad u xiiseeysaa alaab gacmeed iyo farshaxan gacmeed. Waxaan ku haynaa farsamayaqaannada ugu fiican Tuscany, Talyaaniga. Gobolka Tuscany ee Talyaanigu waa wadnaha iyo nafta waxsoosaarka maqaarka raaxada leh ee adduunka iyadoo sirta ganacsiga loo gudbinayo jiilalka.
Sirta Qoyska Waxaay Ku Dhaceen Taariikh
Bixitaankii, horu-socodkii iyo dhaqdhaqaaqii baayacmushtariga magaalo-dawladeed ee Qarniyadii Dhexe wuxuu ahaa jawi ku habboon warshadaha hargaha maqaarku inay qarxaan. Guild-yada waxaa loo sameeyay inay ilaaliyaan farsamooyinka qarsoodiga ah ee loo isticmaalo soo saarida maqaarro tayo leh oo aan lala tartamin meelo kale oo adduunka ah. Farsamooyinkan ayaa weli ah kuwo si dhow loo ilaaliyo siraha qoyska, oo jiilba jiil looga sii dhiibo meelaha hargaha ugu wanaagsan adduunka laga soo saaray in ka badan nus sano. Maanta Talyaanigu wuxuu xisaabiyaa ku dhowaad 16% wax soo saarka maqaarka adduunka iyo in ka badan saddex-meelood meel dhammaan maqaarka laga soo saaro Yurub.
Qalabka Tayada Sare iyo Feejignaanta faahfaahinta
Kuwani waa astaamaha, kuwaas oo ka dhigaya abuuritaankeennu mid dhab ah oo wakiil ka ah farshaxanka Tuscan.
Heerka sare ee badeecada waa annaga natiijada ka dhaxaysa dhaqanka iyo qiyamka casriga ah.
Ujeedadeenu waxay tahay in aan gaarno wax soo saar, kaas oo buuxiya baahiyaha casriga ah ee isku-darka iyo ergonomic.
Bacda Laptop-ka ah ee maqaarka
Bacda kumbuyuutarka ayaa muhiim u ah nolosheena maalinlaha ah, marka lagu daro kumbuyuutarka oo ay ku jiri karaan dokumentiyo, xusuus qor iyo waxyaabo kale oo looga baahan yahay shaqada ama waxbarashada. Bu ...
Xilliga xagaaga: boorso cas ama boorso buluug ah?
Marka cimilada diiran ugu dambeyntiina ay timaaddo maalmahana ay sii dheeraadaan, midabada mugdiga ah way dhammaadaan, iyagoo u daaya boos ubaxyo dhalaalaya, firfircoon, oo lagu dallacay muhiim ...
Degmada Tanning ee Florence
Degmooyinka maqaarka iyo kabaha ee Tuscany waa run dhab ah oo muhiimad caalami ah leh, heerka sare ee laga sameeyay Talyaaniga, oo ...
Ku Saabsan Pisa Pelle
Pisa Pelle waxaa iska leh shirkad iibisa iyo suuqgeyn Mareykan ah oo fadhigeedu yahay Texas. Pisa Pelle waxay aad u xiiseeysaa alaab gacmeed iyo farshaxan gacmeed. Waxaan ka helnay farsamayaqaannada ugu fiican Florence & Pisa, Gobolka Tuscany ee Talyaaniga. Florence waa wadnaha iyo nafta waxsoosaarka maqaarka raaxada leh ee adduunka iyadoo sirta ganacsiga loo gudbinayo jiilalka. Waxaan ku dooranay alaab-qeybiyeyaashayada ku saleysan tayada gaarka ah iyo isgaarsiinta weyn si ay nooga caawiyaan inaan siino adeegga macaamiisha heer sare ah. Waxaan u rarnaa adduunka oo dhan. Toddobaad gudihiis waxaannu sida caadiga ah ugu adeegi doonnaa 30 waddan oo kala duwan oo ku yaal qaarad kasta marka laga reebo South Pole. Adeegga Macaamiisha ayaa ah mudnaantayada. Sababtoo ah adiga la'aanteed waxaan ka bixi doonnaa ganacsiga. Fadlan na raac Instagram iyo Facebook.
Qoraal, Email ama Wac: +1 214-444-9482
Leather Pisa Pelle Talyaani Talyaani ah
American Express Apple Pay Cunnada Club Baro Eelo Google Pay JCB Mastercard PayPal Dukaan Bixinta Venmo Visa